ငွေလမင်း: မြန်မာနိုင်ငံသား ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်
Posted by ငွေလမင်း at 3:59 PM
ချက်ချင်းပဲသူ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လေး တက်ကြည့်လိုက်တယ်.. အတော်ကိုတော်တာပဲဗျာ.. ဂုဏ်ယူမိတယ်...
အဟီး ကျနော်လဲ ကြိုးစားအုန်းမယ်ဗျာ.. ဟောလိဝုဒ် မင်းသားဖြစ်ချင်သေးတယ်.... :P
ဂုဏ်ယူပါတယ်။မြန်မာကထူးခြားတယ်။ရှားပါးတယ်။ဟောလီးဝုဒ်မှာနာမည်ဆိုးမရှိသေးဘူး။ တဲ့ သူဂုဏ်ယူသလိုကျနော်လဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ.... ဒါပေမယ့်.... အင်း ဒါပေမယ့်.... ဟူးးး ဒါပေမယ့်ပေါ့ဗျာ....
အရမ်းတော်ပါတယ်...ကျနော်ကတော့မြန်မာလို့ပြောရမှာ ရှက်သလိုလို ကြောက်သလိုလိုဖြစ်နေပြီ...
ဒီလိုလူမျိုးတွေ များများရှိပါစေပေါ့....နိုင်ငံအတွက်ပါ ဟဲဟဲ
ကြွားလိုက်အုံးမယ်....ကိုရဲထွန်းဇော်ရေ...သာမီးကတော့ ပညာတွေအဲ့လောက်မတတ်ဘူး...ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကျရာအလုပ်မှာ အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလိုက်တော့GM ကြီးက ၀န်ထမ်းတွေ အများကြီးထဲမှာ ဖြူကို အချစ်ဆုံးဗျာ...အဲ့ဒီတော့ မြန်မာဖြစ်တာကိုမရှက်ပါဘူး.. I'm From Myanmar လို့ အမြဲဂုဏ်ယူပြီးပြောတယ် ဗျို...ရရာကိုထုတ်ကြွားချင်းဖြစ်ပါတယ်...ဟိဟိ
မဖတ်ဖူးတော့လည်း ဗဟုသုတ ရတာပဲပေါ့ဗျာ။
မြန်မာတွေ မညံ့ပါဘူး. မြန်မာအချို့သာ ညံ့ပါသည်။ ကမ္ဘာစီးပွားရေးကပ်ဆိုက်တုန်းကတောင် ဆရာကြီး 100 ထဲမှာ မြန်မာ့ဦးနှောက်နဲ့လဲ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးရဲ့ စီးပွားရေးကပ်ဆိုးကြီးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အရင်ကတည်းကလဲ မြန်မာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးဇတ်ဆောင်တွေ တိုင်းတပါးမှာ အောင်မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဂုဏ်ယူစရာပဲ အဲ့လိုအနုပညာရှင်မျိုး ရှိမယ်မထင်ဘူး ခုလိုတင်ပေးတာ ရှားပါးတဲ့ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ။
ငွေလမင်းတို့ Hollywood ရောက်နေသလားလို့..
Mr ငွေလမင်းကိုယ်တိုင်များ သွားပြီး ဗျူးခဲ့တယ် ထင်လိုက်တာ
ကောင်းကြောင်းနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်..
ပြန်လည်မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ ငွေလမင်းတို့ရေ။